အသက် ၂၄ လမှ ၆ လအထိ - ယုံကြည်မှု၊ လှုံ့ဆော်မှု၊ ကြည်လင်ပြတ်သားမှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြွယ်ဝမှု - သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်
အသက် ၂၄ - ၆ လ - ပို၍ ယုံကြည်မှု၊ လှုံ့ဆော်မှု၊ ကြည်လင်ပြတ်သားမှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြွယ်ဝမှု
ယနေ့သကဲ့သို့ငါအတိအကျတစ်ဝက်တစ်နှစ် NoFap အပေါ်ပါပြီ။ ငါသည်ဤအချိန်တစ်လျှောက်လုံးအမြင့်ဆုံးစံချိန်တင်မြင့်တက်ခြင်းနှင့်အလွန်နိမ့်နိမ့ခဲ့ပြီးပြီ, ဒါပေမယ့်မသက်ဆိုင်ငါခံစားခဲ့ရပါပြီဘယ်လိုကူကယ်ရာမဲ့နှင့်အကူအညီမဲ့၏, ငါသည်ဤလုပ်ဖို့ဆက်လက်, ငါမှအကြောင်းပြချက်ငါ၏စာရင်းရှည်မှဆက်လက်။ အောက်တွင်စာရင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့အများစုသိကြသည့်အတိုင်း, NoFap abstinence တစ်အချို့သောကာလပြီးနောက်မှတ်သားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြတ်သားပေးနိုင်ပါသည်။ ကျောင်းမှာ၌ငါ့အောင်မြင်မှုတိုက်ရိုက်အာရုံကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့, ငါ့စွမ်းရည်ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်အဖြစ်ဤငါ့အဘို့ကြီးမားတဲ့စေ့ဆော်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မမကြာခဏ fapping ငါအခါ, ငါစနစ်တကျဖြစ်လာချိန်းလက်လွတ်, တာဝန်တွေနှင့်ပဟေဠိရက်စွဲများကိုမမေ့ခက်ခဲတဲ့အချိန်လေ့လာနေကြကာလအတွင်းမှာတော့ ... စာရင်းတွင်ပေါ်တတ်၏။
စိတ်နှစ်ပါးပြည်နယ်များအကြှနျုပျ၏အသကျ သာ. ကွီးမွတျစိတျအပိုငျးအဘို့အနေ့တိုင်းနောက်တော်သို့လိုက်ကြပြီ။ အဲဒီမှာရှာနေတစ်စုံတစ်ဦးက fucking ဂုဏ်ယူခံစားတဲ့အခါအချိန်မည်သည့်အခါမျှ, ငါစိတ်ချလက်ချရှိလိမ့်မည်ဘယ်တော့မှသည်ဟုဆိုနိုငျသညျ။ ငါ့မျက်နှာပြင်အောက်, မျက်စိအတွင်းကလူကိုကြည့်ခြင်းနှင့်မဟုတ်တော့ရှိကွောငျးကိုသိနိုင်မည်ဖို့ရန်အလွန်အချိန်ကြာမြင့်စွာအဆုံးပေါ်နာရီမီည binging ၏စာမျက်နှာတောငျ့ပါပြီ။ ငါသည်ဤအချိန်နှင့်အပြုံးပေါ်ပြန်ကြည့်နိုင်ပါလိမ့်ချင်တယ်။ ကိုယ့်သေးကြောင်းမပွုနိုငျ, ဒါပေမယ့်ထိုနေ့ရက်ကဖြစ်ဖို့အသုံးပြုထက်အများကြီးပိုနီးစပ်သည်။
ဒီအလုနီးပါးပြောနေစရာမလိုဘဲတတ်၏။ စသည်တို့ကိုတစ်ဦးပွိုင့်မြှင့်သို့မဟုတ်မိန်းကလေးတစ်ဦးမှကိုယ့်ကိုကိုယ်မိတ်ဆက်ပေးရန်, လူတန်းစားအတွက်မေးခွန်းမေးစရာ, မျက်လုံးချင်းအောင်, သူစိမ်းစကားပြောတစ်ခုမှာတစ်ဦး Streak သို့တပတ်နဲ့ငါဖြစ်၏, တစ်ဦးသံသယမရှိဘဲပိုမိုရှိုသုံးစွဲခဲ့သူတစ်စုံတစ်ဦးကဲ့သို့ပင် သူတို့ရဲ့ဘဝကိုအများစုပင်မလုံလောက်, ရှက် feeling, ငါသည် NoFap မှတဆင့်ရရှိသောယုံကြည်မှုတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောဖြစ်ပါတယ်။
ယုံကြည်မှုဆင်တူ, လှုံ့ဆျောမှုတစ်ခုထပ်တိုးကျွန်တော်တို့အများစုက NoFap အပေါ်ကြုံတွေ့ဘူးသောအရာတစ်ခုခုသည်။ ကာလငါကွာခဏ FAP သည့်အခါစဉ်အတွင်းပိုသောအရာတို့ကိုပြီးပြီ get, ငါကသူတို့ကိုလုပ်နေတာအကြောင်းကိုပိုကောင်းခံစားရသည်။ ဒါဟာအံ့သြစရာပါပဲ။
ဒါဟာအပြစ်ရှိတယ်လို့, အရှက်ကွဲအခမဲ့ဖြစ်ခြင်းမှနီးကပ်စွာဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ်။ NoFap နှင့်အတူအောင်မြင်မှုငါ၏ဘွဲ့မသွားပါစေငါကြိုးစားပြီး (နှင့်သင်လည်းသင့်ပါတယ်) သလောက် Self-တန်ဖိုးရှိငါ့အသိအပေါ်တစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့ bearing ရှိသည်, ကပါဘူး။ Long ကအိညနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောငါ့ကို shitty လူတစ်ဦးနဲ့တူခံစားမိစေပါ, သူတို့ကအမြဲတမ်းလိမ့်မည် binging porn ၏ဖြုန်းနေ့လည်ခင်း။ ငါသည်ငါ့ Self-တန်ဖိုးရှိတည်ဆောက်ခြင်းကိုဆက်လက်ဖြစ်ကြောင်းကိုလျှင်, ငါကဒီကိုရှောင်ကြဉ်ရန်ဆက်လက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
သို့သော်သင်သည်လိမ့်မည်ဒီတစ်ခုယူပါ။ ငါမူလကပိုကောင်းတဲ့ဖော်ပြရန်မရှိခြင်းသည်, ဒီ "ဝိညာဏအတပြင်လုံးကို" အဖြစ်စာရင်းသွင်းခဲ့ပေမယ့်ငါစကားလုံးမှာ wince လေ့, ဒါကြောင့်ငါကထွက်ခေါ်သွားတယ်။ ဒါကြောင့်သက်ဆိုင်လျှင်အထဲတွင် Leave;) ။ ဒါဟာအကြောင်းပြောဆိုရန်စိတ္တဇအရာတစ်နည်းနည်းရဲ့, ဒါပေမယ့်ယေဘုယျအားဖြင့်ငါနေ PMOed မလာကြနဲ့ကျွန်မတစ်ဦးဝိညာဉျသခဲ့လျှင်, သန့်စင်ပါလိမ့်မယ်တဲ့အခါမှာလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ်ကိုပိုမိုတပြင်လုံးကိုခံစားကြရသည်။ ငါကအခြားလူတွေကိုသင့်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းသို့ကျန်းမာတဲ့လူများအတွက်ဖိတ်ကြားချက်ကိုဖွင့်လှစ်နိုင်သည့်အပြင်ဒီတွေ့နိုင်ပါသည်ထင်ပါတယ်။
ကျွန်မကိုယ်အကြောင်းကိုကိုပြောင်းလဲချင်သောအရာတစ်ခုခုဖြစ်သည့်အမှုအရာပြီးသွားမယ့်ရှည်လျားသမိုင်း, ရှိသည်။ ငါမရှိသလောက်ငါအရှိဆုံးသောအရာတို့ကိုပြုပါထက်ပိုပြီးဒီတစ်ခုထွက်ကပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်စသည်တို့ကိုငါယေဘုယျအားဖြင့်အဖြစ်မကြာမီငါ start အဖြစ်လေ့ကျင့်ခန်းကိုရပ်တန့်, ငါ့စာအုပ်တွေအများအပြား bookmarks ကိုမှတဆင့် midway ကြပါပြီ, ဗွီဒီယိုဂိမ်းများကိုပြီးအောင်လုပ်ပါ။ , 90 ရက်ရယူခြင်း (နှင့်ကျော်လွန်ပြီး) စွဲလမ်းသိမ်းပိုက်အတွက်, ဒါပေမယ့်လည်းတစ်ခုခုမှကျူးလွန်တည်းခိုမယ့်, ငါ့အဘို့ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုဖြစ်လိမ့်မည်။
ဤသည်မှာဦး / Self_as_object (မာကု Queppet / မွငျ့မွတျလိင်ကောင်လေး) တစ်ခုခုအကြောင်းကိုစကားပြောနှင့်တကယ်ငါနှင့်အတူအပဲ့တင်ထပ်နေသည့်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာ၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများသို့ကူးသယ်ဆောင်နိုင်သော NoFap ရှိသူတို့အမှုအရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆိုပါမသက်မသာအမြဲတည်သောအဆင်ပြေဖြစ်လာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Self-confining အလေ့အထများကိုချိုးဖျက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ရှိစွာကျနော်တို့ဖြစ်ကိုယျ့ကိုယျကိုတည်ဆောက်ကြဖို့အရေးကြီးနေသည်ကိုလူဖြစ်လာခြင်းအပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့စတင်နိုင်ရန်ကျွန်တော်တို့ကို enable နိုင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာတစ်ဝှမ်းဖြစ်ပါတယ်သကဲ့သို့cliché, ကစစ်မှန်တဲ့ပါပဲ။
ဤသည်ယခင်အမှတ်ကနေအဓိကအား, ဒါကြောင့်နည်းတူအဖိုးတန်ပါတယ်။ သငျသညျကြှနျုပျတို့အားလုံး hypofrontality ထံမှခံရသောစိတ်ကူး, ဒါမှမဟုတ် neurochemical ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအချို့နဲ့အခြားပုံစံသို့ဝယ်ဖို့ဖြစ်စေမ, သင်တို့ကိုငါပိုပြီးအကြိုး၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ညာဘက်အတွက်အကျိုးရှိတစ်ခုခုအောင်မြင်ရန်နိုင်အောင်သင်အသည်းအသန်ချင်သောအရာတစ်ခုခုချွတ်နိုင်စွမ်းကျင့်သုံးထင်တယ် ။
တစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် (နောက်ဆုံး) ရည်းစားဖြစ်ခြင်း
ငါ့အဘို့, porn မှာရှာနေသောငါ၏အဖော်ဆီသို့ဦးတည်နိုင်သမျှင်နှင့်အသုံးပြုမှုနှင့်အတူတိုးပွါးကြောင်း dissonance မိတ်ဆက်မေတ္တာနှင့်နှစ်ခြိုက်၏အပြည့်အဝအတိုင်းအတာ feeling (နှင့်မကြာခဏလေးစား) မရှိချေ။ ငါအဆုံးသတ်သည်ငါ့နောက်ဆုံးကြားဆက်ဆံရေးပြီးနောက် NoFap စတင်ခဲ့သည်။ ဤအချိန်ကာလအတွင်းကျွန်မအသက်တာ၏အခြားမည်သည့်ကာလတွင်ရှိသည်ထက်ပိုမိုစိုက်ပျိုးကြသည်။ ငါငါ့အဤလောကသို့ဆောင်ကြဉ်းသောနောက်တစ်နေ့လူတစ်ဦးကိုကမ်းလှမ်းဖို့တရားဝင်အံ့သြစရာတစ်ခုခုရှိယုံကြည်ပါတယ်။ ငါလူတစ်သူတို့သည်ငါနှင့်အတူဖြစ်ကြောင်းကံကောင်းဖြစ်ချင်တယ်, ငါသည်ဤယခုဖြစ်နိုင်ထင်ပါတယ်။
လျော့ပါးသွားမည်ဖြစ်သလို, အချိန်ကြာမြင့်စွာအဘို့အကြည့်ရှုပြီးနောက်, ငါသည်ငါ့အမြင်လယ်ပြင်၌ရှိသောမည်သည့်မိန်းကလေးတစ် ဦး အနေဖြင့်အမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုရှာကြံရှာတွေ့ တစ်စုံတစ် ဦး ၏လှပမှုကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်အမှန်တကယ်တန်ဖိုးထားခြင်းတို့သည်ဤပျော်ရွှင်မှုမျိုးနှင့်လုံးဝခြားနားသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို porn နဲ့ခဏခွာပြီးတဲ့အခါမိန်းကလေးငယ်များအပေါ်အမြင်တူကြည့်တာကိုမရပ်တော့ဘူးဆိုတာသူတို့သိသွားသည်။ အဲဒီအစား, ငါတပြင်လုံးကိုလူတစ် ဦး အတွက်ယူစတင်ခဲ့သည်
သငျသညျစာရင်းသွင်းသမျှယန္တရားအသုံးပြုပုံအလွန်အကျွံ porn ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေသူတို့ရဲ့လေးရယ်မှစိတ်ခံစားမှုခံစားရရန်သင့် (သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးအကြှနျုပျ၏) စွမ်းရည်ကိုလြော့နိုင်ပါတယ်။ ငါသည်ဤတိုင်းတာရှည် Streak စဉ်အတွင်းစစ်မှန်တဲ့ဖြစ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါသည်ငါ့အစောပိုင်းအလင်းတန်းများဖြာထဲကတစ်ခုသို့အကြောင်းကိုဆယ်ရက်အပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာအတွက်ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးကောင်းသောအော်ဟစ်သောအသံကိုရှိခဲ့ပါတယ်။ ထိုအချိန်မှစ. ကျွန်မအကြိမ်ပေါင်းများစွာဟစျကျွောလေ၏င့် - သီချင်းနားထောင်နေတဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ရှုခြင်း, ငါ၏အသက်တာ၌လူတွေစဉ်းစားနေချိန်မှာပင်လှပသောစိတ်ကူးများငါ့ကိုစိတ်ခံစားမှုကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဤသည် NoFap ရှေ့တော်၌ထိုအမှုမဟုတ်ပါ။ နေသမျှကာလပတ်လုံးငါမှတ်မိနိုင်သကဲ့သို့, ငါ Melancholie ငါ့ကိုလှည့်ပတ်လောက၏ယေဘုယျအားဖြင့်ထိခိုက်ခဲ့ကြပြီ။ အခြို့သောအမှုအရာငါနေထိုင်ခဲ့သည့်မီးခိုးမြူမှတဆင့်ဖြတ်ဖို့လုံလောက်တဲ့အစွမ်းထက်ခဲ့ကြပေမယ့်အများအားဖြင့်ကိုယ့်မြော။ ငါမသက်မသာထုံခဲ့သည်။ ဒီပြောင်းပြန်ငါ NoFap စတင်ကတည်းကတွေ့ခဲ့ဖူးသမျှကိုပိုမိုလေးနက်ပြောင်းလဲမှုများကိုတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်များနှင့်အထူးသဖြင့်အကြိုးဖြစ်ခဲ့သည်။
စိတ်ခံစားမှု sensitivity ကိုတီထွင်ဖန်တီးမှု၏ ပို. ပို. မကြာခဏကွဲမြင့်တက်ပေးထားတယျ။ သင်ဖန်တီးထားသောင့်တစ်ခုခုများကပြောင်းရွှေ့ခံရသညျအမှနျတကယျအကြိုးများနှင့်ယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အားဖြည့်သည်။ ငါစတင်ခဲ့ကတည်းကယခင်လေးနှစ်ရှိထက်ငါနောက်ဆုံးလအနည်းငယ်အတွင်း၏အမှန်တကယ်ဖြစ်ရတာဂုဏ်ယူပါတယ်ပိုဂီတကျမ်းစာ၌ရေးထားပါတယ်။ ငါသညျလညျးကိုယ့်ကိုယ်ကိုဝေးငါ့အသက်ကိုအတွက်ပြဇာတ်ကနေဖယ်ရှားသောအရာတို့ကိုအကြောင်းကို daydreaming ရှာပါ။ ဤသည်ယေဘုယျအားဖြင့်တစ်ဦးထူးဆန်းအရောအနှော Self-ဝေဖန်မှုနဲ့ကျွန်မအချို့သောလမ်းအတွက်ချီးမြှောက်ခြင်းခံခဲ့ရသည်သောစိတ်ကူးယဉ်အခြေအနေများဖြစ်သည့်သမိုင်းကြောင်းအကြှနျုပျ၏စိတျနှလုံးကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ရာကနေဝေးငိုကြွေးသံဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ ပို. ပို. ပိုမိုလွတ်လပ်သောယခုငါကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ထင်ဖို့နဲ့နောက်တဖန်ဖန်တီးရန်မှုတ်သွင်းရှာဖွေပါ။
တိုးမြှင့် arousal လိုအပ်တဲ့အခါ
ကန့် (နှင့်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်) အတိုင်းဤလူမျိုးကိုအများကြီးအဘို့အကြှနျုပျအဘို့ပြဿနာအဖြစ်အများကြီးဖြစ်မထားပါဘူး။ သို့သော်ကျွန်မရဲ့လိင် drive ကိုများသောအားဖြင့်ဖြောင့်မတ်တစ်မူးရူးပြီးသည်မှနောက်ကဖြစ်သင့်သကဲ့သို့ခိုင်မာတဲ့မဟုတ်ခဲ့ဘယ်မှာအခြေအနေများတွင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
porn Bing ပိုမိုပျောက်အိပ်ပျော်ခြင်းအဘယ်သူမျှမ
ငါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အိပ်ပျော်နေသောတစ်ခက်အချိန်ရှိသည်သောအခါငါကာလဖြတ်သန်းသွားအဖြစ်ဤငါ့အဘို့ကြီးတွေတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သင်ထိုနေ့ရက်လုပ်ဖို့အရေးကြီးသောအရာများကိုရှိတယ်အထူးသဖြင့်လျှင်, အလုပ်ပြီးကမြင်းနေကြတယ်အမြဲထွက် porning တွေအများကြီးယူတာပဲတက်တည်းခိုနေသောကြောင့်အိပ်ပျော်ရာလေးနာရီအတွင်းအပြီးနှိုးခြင်း။ ငါမကြာသေးမီကငါနှစ်ပေါင်းများစွာအတွက်မတွေ့မမြင်ဖူးမိသားစုဝင်များနှင့်အတူအပြန်အလှန်ခဲ့သည့်ပြီးနောက်အသုဘမီည binged ။ ငါဆိုးရွားစွာအဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်သိသိသာသာတစ်ခုလုံးကိုအချိန်ထွက်ဝတ်ဆင်နှင့်အကျိုးဆက်အဖြစ်, ငါတကယ်မည်သူမဆိုအတူတက်ဖမ်းရန်မတတ်နိုင်ခဲ့, နှင့်ဖြစ်ကောင်းအပြုသဘောအထင်အမြင်ထက်လျော့နည်းထားခဲ့တယ်။ လုံလောကျအိပျပျြောရယူခြင်းသင်သည်ကိုယ်အဘို့ပွုနိုငျအရေးကြီးဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်မူးရူးကနေတည်ငြိမ်မှုခံစားနေရသောလူစုများကြားနှင့်အတူအိပ်စက်မှုကြွေးမြီနားဆက်မှီရာတွင်ကြောက်မက်ဖွယ်မသက်မသာနဲ့အစဉ်အမြဲငါပြန်လုပ်ချင်ကြဘူးကြောင်းအရာတစ်ခုခုသည်။
NoFap နောက်ဆုံးမှာ Self-ချစ်ခြင်းမေတ္တာတစ်ဦးလုပ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသူအပေါင်းတို့ထက်, ငါဆက်လက်ရှိသည်သောအရေးအပါဆုံးအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယျ့ကိုယျကိုခစျြထဲကဒီလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုသတိရနိုင်လျှင်ကျွန်တော်ကျရှုံးရသောအခါငါတို့သည် ထောက်. , ခွင့်လွှတ်တတ်ရန်သင်ယူနိုင်ပါသည်, ထို့နောက်ကျနော်တို့နာကျင်မှုများနှင့်အဆင်မပြေတရားမျှတနိုင်ပြီး, ငါတို့သည်ငါတို့၏အမာရွတ်များအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေရန်စတင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာစိတ်အားနှင့်ငါတို့ဇွဲထဲကမွေးဘွား၏နှစ်ဦးစလုံး။ သငျသညျယနေ့ငါ့ထံမှတဦးတည်းအရာတို့ကိုသိမ်း ယူ. လျှင်, ငါကဒီဖွင့်မျှော်လင့်ပါတယ်။
LINK - ယနေ့ NoFap မှာ ၆ လရှိပါပြီ ငါဆက်ပြောနေရတဲ့အကြောင်းရင်းဒီမှာ။